छात्रवृत्ति कोषको झण्डै ८७ करोड रुपैयाँ किन वितरण भएन, यस्तो छ कारण | Diyopost
छात्रवृत्ति कोषको झण्डै ८७ करोड रुपैयाँ किन वितरण भएन, यस्तो छ कारण
काठमाडौँ, कात्तिक ३ । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित छात्रा शिक्षा कोषको करोडौँ रकम वितरण नगरी थन्किएको छ । १० वर्षदेखि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपियाँ थन्किरहेको छ ।
कोष स्थापनापछि जम्माजम्मी एक पटक कक्षा १२ सम्मका छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा छात्रवृत्तिको रकम वितरण गरिएको थियो । शैक्षिक संरचना र व्यवस्थापनमा परिवर्तन आउन थालेपछि कोषको रकम खर्च हुन नपाएको शिक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले भन्नुभयो, “सन्दर्भ परिवर्तन हुन थालेपछि कोष क्रियाशील हुन सकेन । ”
छात्रा शिक्षा कोषसँग जोडिएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भयो भने विद्यालय संरचना (कक्षा १–१२) बनाइयो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भई त्यसको अधिकांश अधिकार पालिकामा लगियो ।
मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार विगतमा सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैङ्कहरूलाई आह्वान गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा कोषको रकम राख्ने गरिन्थ्यो ।
बैङ्कहरूले वार्षिक आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए । ब्याजले पनि कोषको रकम वृद्धि हुन पुगेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैङ्कमा त्यसरी रकम राख्न नपाइने भनी सचेत गराएपछि बैङ्कहरूमा राखिएको मुद्दति खाताको रकमलाई आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको खर्च खातामा सारिएको थियो । हाल थन्किएको सो रकमको ब्याज आउँदैन ।
मन्त्रालयका अनुसार कोष स्थापना हुँदा बर्सेनि दुई करोड रुपियाँका दरले रकम जम्मा गर्ने गरिन्थ्यो । खर्च नै नहुने भएपछि गत आर्थिक वर्षबाट एक लाख रुपियाँ सो कोषमा जम्मा गर्न थालियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि कोषमा एक लाख रुपियाँ मन्त्रालयले थपेको छ ।
साविकका निकायहरू शिक्षा विभाग र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरूलगायत निकायले बेग्लाबेग्लै छात्रवृृत्ति वितरण गर्दै आएपछि छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने र छात्रवृत्ति वितरणमा दोहोरोपन नहोस् भन्ने सोचअनुरूप छात्रा शिक्षा कोष स्थापना भएको थियो ।
बाढीले पुर्याएको क्षति अवलोकन गर्न चितवन पुगे प्रचण्ड
कोरोना भाइरसबाट थप तीन जनाको मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या ३८ पुग्यो
देशवासीको नाममा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनः ‘सार्वभौमसत्ता र गणतन्त्रको रक्षाको लागि कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ’ (पुर्णपाठ)
सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्णय
पछिल्लो २४ घण्टामा ११८ जना संक्रमित थपिए
गुल्मीमा पहिरोको ढिस्कोले पुरिएर ६२ बर्षीय बृद्धको मृत्यु
गल्छी गाउँपालिकामा ‘क्वारेन्टाइन खाना खर्च’मा अनियमितता : बीलबिनै ७ लाख भुक्तानी !
कोरोना संक्रमित घट्यो : पछिल्लो २४ घण्टामा जम्मा ७० जना संक्रमित थपिए !
‘समाचारमा हाम्रो आपत्ति छ’